Ethiopia oo kasoo horjeesatay kormeerayaal baara dilal ka dhacay dalkeeda oo ay Qaramada Midoobay dalbatay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldEthiopia oo kasoo horjeesatay kormeerayaal baara dilal ka dhacay dalkeeda oo ay Qaramada Midoobay dalbatay
August 11, 2016 Puntland Mirror World 0
Afhayeenka dowlada Ethiopia, Getachew Reda.
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Ethopia ayaa diiday codsi ka yimid Qaramada Midoobay kaasoo u ogolaanaya kormeerayaal caalami ah in ay baaraan dilalka ciidamada amaanka ay dhawaan u gaysteen banaanbaxayaal dhigayay mudaharaad ka dhan ah dowlada.
Getachew Reda, oo ah afhayeenka dowlada Ethopia, ayaa u sheegay taleefishinka Al Jazeera maanta oo Khamiis ah in Qaramada Midoobay ay ka hadleen fikirkooda laakiin dowlada Ethopia ay masuul ka tahay nabadgalyada dadkeeda.
Afhayeenka, ayaa sheegay in dowladiisa ay samayn doonto baaritaan haddii ay jiraan gaboodfalo ay ciidamada amaanka geysteen.
Reda, hadalkiisa ayaa yimid kadib markii Qaramada Midoobay ay ka codsatay dowlada Ethiopia in ay ogolaato kormeerayaasha si ay u baaraan dilalka ugu yaraan 90 banaanbaxaayl ah oo ka dhacay gobolada Oromia iyo Amhara dhamaadka asbuucii lasoo dhaafay.
August 12, 2016 Hoggaamiyaha golaha Oromada oo sheegay in dagaalka dib u eegida dhulka uu Ethiopia u jihayn karo dagaal sokeeye
September 4, 2016 Turkiga oo markab caawimo wada u diray Falastiiniyiinta
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxa kooxda hubaysan ee Daacish (ISIS) ee Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ayaa Maraykanka ku daray shalay oo Arbaco ahayd liiska argagixisada caalamka, taasoo keenaysa in lagu soo rogo cunqabatayn dhaqaale. “Cabduqaadir Muumin [...]